रोमी ८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
८ तसर्थ, जो ख्रीष्ट येशूसँग एक भएका छन्‌, तिनीहरूलाई दोषी ठहराइँदैन। २ किनकि ख्रीष्ट येशूको चेला भएको नाताले तिमीहरूलाई जीवन दिने परमेश्वरको पवित्र शक्तिको व्यवस्थाले तिमीहरूलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पारेको छ। ३ मानव असिद्धताले गर्दा मोशाको व्यवस्थाले जे गर्न सकेन, आफ्नो छोरालाई पापी मानवको बनौटमा पठाएर परमेश्वरले त्यो पूरा गर्नुभयो। अनि यसरी परमेश्वरले शरीरमा बास गर्ने पापलाई दोषी ठहराउनुभयो, ४ ताकि शारीरिक इच्छाअनुसार होइन तर पवित्र शक्तिको डोऱ्याइबमोजिम चलेर हामी मोशाको व्यवस्थाको उचित माग पूरा गर्न सकौं। ५ किनकि जो शारीरिक इच्छाअनुसार चल्छन्‌, तिनीहरूले शारीरिक इच्छाहरूमै मन लगाउँछन्‌ तर जो पवित्र शक्तिको डोऱ्याइबमोजिम चल्छन्‌, तिनीहरूले परमेश्वरका कुराहरूमा मन लगाउँछन्‌। ६ शारीरिक इच्छाहरूमा मन लगाउनुको अर्थ मृत्यु हो, तर परमेश्वरका कुराहरूमा मन लगाउनुको अर्थचाहिं जीवन अनि शान्ति हो। ७ शारीरिक इच्छाहरूमा मन लगाउनुको अर्थ परमेश्वरसित दुस्मनी राख्नु हो, किनकि शारीरिक इच्छा परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, भनौं भने हुन पनि सक्दैन। ८ त्यसैले जो शारीरिक इच्छाअनुसार चल्छन्‌, तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्‌। ९ तथापि, यदि तिमीहरूमा परमेश्वरको पवित्र शक्ति बास गर्छ भने तिमीहरू शारीरिक इच्छाअनुसार होइन तर पवित्र शक्तिको डोऱ्याइबमोजिम चलिरहेका हुन्छौ। तर यदि कसैसित ख्रीष्टको मनोभाव छैन भने ऊ ख्रीष्टको हुन सक्दैन। १० तर यदि तिमीहरू ख्रीष्टसित एक भइसकेका छौ भने पापले गर्दा तिमीहरूको शरीर मुर्दासरी भए तापनि पवित्र शक्तिले तिमीहरूलाई जीवन दिनेछ, किनकि तिमीहरू परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिसकेका छौ। ११ अब यदि येशूलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुहुनेको पवित्र शक्ति तिमीहरूमा बास गर्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुहुनेले तिमीहरू भित्र बास गर्ने आफ्नो पवित्र शक्तिद्वारा तिमीहरूको मरणशील शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। १२ त्यसकारण, ए भाइहरू हो, अब हामी शारीरिक इच्छाअनुसार जिउन अनि त्यसका इच्छाबमोजिम चल्न बाध्य छैनौं। १३ यदि तिमीहरू शारीरिक इच्छाबमोजिम चल्यौ भने तिमीहरू पक्कै मर्नेछौ तर पवित्र शक्तिको मदतद्वारा पापी शरीरका कामहरूलाई माऱ्यौ भने तिमीहरू बाँच्नेछौ। १४ किनकि परमेश्वरको पवित्र शक्तिको डोऱ्याइअनुसार चल्नेजति सबै परमेश्वरका छोराहरू हुन्‌। १५ परमेश्वरको पवित्र शक्तिले हामीलाई दास बनाउँदैन न त फेरि भयभीत बनाउँछ, बरु त्यही पवित्र शक्तिले* हामीलाई परमेश्वरको धर्मपुत्र बनाउँछ र त्यही शक्तिद्वारा हामी “अब्बा,* हे बुबा!” भनेर पुकार्छौं। १६ हामी परमेश्वरका सन्तान हौं भनेर पवित्र शक्ति* आफैले हाम्रो मनलाई बोध गराउँछ। १७ यदि हामी उहाँको सन्तान हौं भने, उत्तराधिकारी पनि हौं, परमेश्वरको उत्तराधिकारी अनि ख्रीष्टका सँगी उत्तराधिकारी। यदि हामी उहाँसँगै दुःख भोग्छौं भने उहाँसँगै गौरवान्वित पनि हुनेछौं। १८ त्यसकारण, म के ठान्छु भने, अहिले यस वर्तमान समयमा हामीले भोगिरहेको कष्ट, हामीले पाउने गौरवको तुलनामा केही पनि होइन। १९ किनकि सृष्टिले पनि परमेश्वरका छोराहरू प्रकट हुने समय अति उत्सुकतासाथ पर्खिरहेको छ। २० किनकि सृष्टिलाई व्यर्थताको अधीनमा पारियो, तर त्यसको आफ्नै इच्छाले गर्दा त होइन तर त्यसलाई त्यसरी अधीनमा पार्नेको इच्छाले गर्दा। यस आशामा कि २१ भ्रष्टताको दासत्वबाट स्वतन्त्र भएर सृष्टि आफैले पनि परमेश्वरको सन्तानको रूपमा गौरवशाली स्वतन्त्रता पाउनेछ। २२ किनकि हामीलाई थाह छ, सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ सुस्केरा हाल्दै पीडाले छटपटाइरहेको छ। २३ त्यति मात्र होइन, अगौटे फल अर्थात्‌ पवित्र शक्ति पाएका हामीहरू; हो, हामीहरू पनि आफ्नो मनमा सुस्केरा हाल्छौं र परमेश्वरको धर्मपुत्र बन्ने अनि फिरौतीद्वारा हाम्रो शरीरबाट मुक्त हुने तीव्र प्रतीक्षा गर्छौं। २४ परमेश्वरले हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नुहुँदा हामीले यही आशा पायौं। तर जुन आशा देखिन्छ, त्यो आशा होइन, किनकि कुनै कुरा देखेपछि, के मानिसले त्यसको आशा गर्छ र? २५ तर यदि हामी जे कुरा देख्दैनौं त्यसको आशा गर्छौं भने धैर्य गरेर त्यसको प्रतीक्षा पनि गरिरहन्छौं। २६ त्यसैगरि, पवित्र शक्तिले पनि हामी कमजोर भएको बेलामा मदत गर्न सक्छ। किनकि समस्या के छ भने, हामीले प्रार्थना नगरी नहुने बेला, के कुराको लागि प्रार्थना गर्ने, त्यो हामीलाई थाह नहुन सक्छ। त्यतिखेर हाम्रो मनमा दबेका सुस्केराहरूको निम्ति पवित्र शक्तिले हाम्रो तर्फबाट बिन्ती गरिदिन्छ। २७ पवित्र शक्तिले के भन्न खोजेको हो, मन जाँच्नुहुनेले त्यो जान्नुहुन्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरको इच्छाबमोजिम पवित्र जनहरूको खातिर बिन्ती गरिरहेको हुन्छ। २८ अब हामीलाई यो कुरा थाह छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनि उहाँको उद्देश्यअनुरूप बोलाइएका मानिसहरूको भलो होस् भनेर परमेश्वरले आफ्ना सबै कामबीच तालमेल मिलाउनहुन्छ। २९ किनकि ज-जसलाई उहाँले सबैभन्दा पहिला स्वीकार्नुभयो, आफ्नो छोराको प्रतिरूप होऊन्‌ भनेर तिनीहरूलाई पहिल्यै नियुक्त पनि गर्नुभयो। उहाँ आफ्ना धेरै भाइमध्ये पहिलो सन्तान हुन सकून्‌ भनेर पनि उहाँले त्यसो गर्नुभएको हो। ३० यसबाहेक, जसलाई उहाँले पहिल्यै नियुक्त गर्नुभयो, तिनीहरू उहाँले बोलाउनुभएकाहरू पनि हुन्‌, अनि जसलाई उहाँले बोलाउनुभयो, तिनीहरू उहाँले असल ठहराउनुभएकाहरू पनि हुन्‌। अन्तमा, जसलाई उहाँले असल ठहराउनुभयो, तिनीहरू उहाँले गौरवान्वित बनाउनुभएकाहरू पनि हुन्‌। ३१ त्यसोभए, हामी यी कुराहरूबारे के भनौं? यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को खडा हुनसक्छ र? ३२ जसले आफ्नो छोरालाई समेत बाँकी राख्नुभएन तर हामी सबैको निम्ति सुम्पनुभयो, के उहाँले हामीमाथि दया गरेर आफ्नो छोराका साथै बाँकी अरू सबै कुरा पनि दिनुहुनेछैन र? ३३ परमेश्वरले चुन्नुभएका जनहरूमाथि कसले आरोप लगाउने? किनकि तिनीहरूलाई असल ठहराउनुहुने परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्छ। ३४ तिनीहरूलाई कसले दोष लगाउने? किनकि जो मर्नुभयो र मृत्युबाट ब्यूँतेर परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो, तिनै ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति बिन्ती पनि गर्नुहुन्छ। ३५ ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई कसले अलग पार्ने? के सङ्कष्टले, वेदनाले, खेदोले, भोकले, नग्नताले, खतराले वा तरबारले? ३६ जस्तो लेखिएको छ: “तपाईंको खातिर हामी दिनभरि मृत्युको मुखमा पर्छौं, हामी काट्न लगिएका भेडाहरूझैं गनिएका छौं।” ३७ तर ठीक उल्टो, हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेको मदतद्वारा यी सबै कुराहरूमाथि हामी पूरै विजयी भएका छौं। ३८ किनकि म विश्वस्त छु, न मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतहरूले, न सरकारहरूले, न अहिले यहाँ भएका न त पछि आउने कुराहरूले, न शक्तिले, ३९ न उचाइले, न गहिराइले, न त अरू कुनै सृष्टिले हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमार्फत व्यक्त भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग पार्न सक्नेछ।
^ रोमी ८:१५ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ रोमी ८:१५ * अरामी शब्द, जसको अर्थ हो, “हे बुबा।”
^ रोमी ८:१६ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।